क्रिस्चियन पास्टरको घिनलाग्दो कर्तुत, बिरामी आउँदा बहाना बनाएर बलात्कार !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
क्रिस्चियन पास्टरको घिनलाग्दो कर्तुत, बिरामी आउँदा बहाना बनाएर बलात्कार !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, माघ १, २०७६
काठमाडौं – राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको ललितपुर जिल्लास्थित कुसुन्तीमा रहेको क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्ने आशा विश्वासी मण्डली चर्चका पास्टर ध्रुबबाबु भनिने विश्वास जोशी सोमवार बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
क्रिस्चियन धर्म प्रचारक पास्टरसँग शारीरिक सम्बन्ध राखे पाप नष्ट हुने भन्दै २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बिरामी भएपछि रोग निको हुने भनेर चर्चमा नियमित गइरहेको बेला आफूलाई जबरजस्ती बलात्कार गरेको भन्दै युवतीले उजुरी दिएपछि जोशीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सन्तोष तामाङले बताए ।
पास्टरको उपचार : बलात्कार ?
सानै उमेरमा बालविवाह गरेकी ललितपुर जिल्लाकी स्वस्तिका (नाम परिवर्तन) शारीरिक रुपमा अस्वस्थ भएर बिरामी छिन् । भागी बिहे गरेकी स्वस्तिकाको वैवाहिक जीवन सुखमय हुन सकेन । माइती पक्षले उनलाई फर्काएर ल्यायो ।
परिवारकै सल्लाहमा ६ महिनाअघि स्वस्तिकालाई कोटेश्वरको एक संरक्षण केन्द्रमा पठाइएको थियो । संरक्षण केन्द्रकी सञ्चालिका सीता (नाम परिवर्तन) ले स्वस्तिकाको हेरचाहको जिम्मा लिएकी छन् ।
बिस्तार–बिस्तारै स्वस्तिकाको व्यवहारमा फरकपन आउन थाल्यो । सीताले स्वस्तिकाको लागि एउटा कस्मेटिक पसल खोल्ने सोच बनाइन् । त्यसपछि सीताले तीन महिनाअघि स्वस्तिकाको लागि पसल खोलिदिइन् ।
कस्मेटिक पसल ललितपुरको नख्खिपोटमा खोलिएको थियो । सीता दिनभर अफिसको कामले कोटेश्वरतिर हुन्थिन् भने स्वस्तिका नख्खिपोटमा रहको कस्मेटिक पसल चलाउँथिन् । पसलमा आउने ग्राहकहरूसँग मिठो बोली नै बोल्ने गर्थिन् स्वस्तिका ।
नख्खिपोट र कुसुन्तीको दूरी ७५० मिटर मात्र हो । कुसुन्तीमा ध्रुबबाबु भनिने विश्वास जोशीको चर्च छ । जहाँ जोशीलाई क्रिस्चियन धर्म प्रचारक पास्टरको जिम्मेवारी छ ।
पास्टरले रोग निको पार्ने गरेको खबर स्वस्तिकाले सुनिन् । शारीरिक रुपमा अस्वस्थ रहेका मान्छेहरू चर्चमा जाने गर्छन् र उनले निको पारेर पठाउँछन् भनेर सुनेकी स्वस्तिका आफू पनि निको हुने आशा बोकेर मंसिर २० गते चर्चमा गएकी थिइन् ।
त्यतिबेला चर्चमा पास्टर एक्लै रहेको स्वस्तिकाले प्रहरीसमक्ष बयान दिएकी छन् । स्वस्तिका चर्चमा आउनेबित्तिकै शारीरिक रुपमा अस्वस्थ रहेको आफूले थाहा पाएको प्रहरी हिरासतमा रहेका पास्टरले समेत बताएका छन् ।
‘तिमीले सानोमा धेरैपटक शारीरिक सम्बन्ध राखेको रहेछौ । त्यसैले तिमीलाई रोग लागेको छ,’ पास्टरले स्वस्तिकालाई भनेछन्, ‘यदि रोगलाई निको बनाउने हो भने मसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नपर्छ ।’ रोग निको हुने आशा गरेकी स्वस्तिकाले पास्टरको कुरा पत्याइन् ।
गोरखा नगरपालिका–६ छहरे घर भएका ४५ वर्षीय पास्टरले त्यसैदिन स्वस्तिकालाई ट्याक्सीमा राखेर महालक्ष्मीथानबाट सातदोबाटोतर्फ जाँदा बायाँपट्टि रहेको सिटी गेस्ट हाउसमा पुर्‍याए ।
पास्टरले पहिला पनि अरु युवतीलाई गेस्ट हाउस लैजाने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ । गेस्ट हाउस पुग्दा सञ्चालकसँग पास्टरको धेरै कुरा हुने गरेको छैन । पास्टर गेस्ट हाउसका नियमित ग्राहक रहेको जनाइएको छ । गेस्ट हाउसमा ग्राहकको विवरण लेख्नुपर्ने भएपनि त्यो होटलमा पास्टरलाई विशेष सुविधाबापत नाम र विवरण खुलाउनु नपर्ने रहेको थियो ।
‘पास्टर र युवती १५ मिनेट कोठामा बसे । १५ मिनेटपछि एक हजार रुपैयाँ दिएर गेस्ट हाउसबाट बाहिर निस्किए,’ गेस्ट हाउस सञ्चालकले भने, ‘पहिला पनि अरु युवतीहरू ल्याएर पास्टर आउने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसरी नै १५ मिनेट बस्नुहुन्थ्यो । अनि एक हजार दिएर गइहाल्नुहुन्थ्यो ।’
पहिलो दिन होटलमा शारीरिक सम्पर्क गरेपछि पास्टर स्वस्तिकाको पसल समेत जाने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पास्टरले कस्मेटिक पसलमै पनि स्वस्तिकालाई जबरजस्ती गरेको पीडितको आरोप छ ।
‘परमेश्वरले भन्नुभएको भन्दै पास्टरले मलाई गेस्ट हाउस लगेर जबरजस्ती गर्‍यो, त्यसपछि २ पटक कस्मेटिक पसलमै बलात्कार गर्‍यो,’ स्वस्तिकाले प्रहरीसमक्ष बयान दिएकी छन् ।
पास्टरसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पाप नष्ट हुने भन्दै जोशीले पटक–पटक स्वस्तिकाको शरीरसँग खेलिरहेको पाइएको छ । स्वस्तिकाको रोग भने निको भएन । स्वस्तिकालाई लागेको रोगको पत्ता समेत पास्टरले लगाउन सक्ने कुरा भएन । उनले बलात्कार गर्न क्रिस्चियन धर्म र पास्टर पदको आड लिएको पीडितको आरोप छ ।
परमेश्वरले भनेको भन्दै पटक–पटक शारीरिक सम्पर्क गर्दा पनि रोग निको नभएपछि उनले शारीरिक सम्पर्क राख्न अस्वीकार गर्न थालिन् । अस्वीकार गर्दा पनि जोशीले शारीरिक सम्पर्क राख्न दबाब दिन थाले । पास्टर जोशीले उनको पसलमै गएर बलात्कार गरे र कसैलाई भनेको थाहा पाए मारिदिन्छु भन्दै ज्यान मार्ने धम्की समेत दिए ।
यसरी स्वस्तिकालाई पटक–पटक धम्की आइरहेको कुरा स्वस्तिकाले सीतालाई बताइन् । सीता छाँगाबाट खसेझै भइन् । सीताले तत्कालै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा पास्टरविरुद्ध जाहेरी दिन लगाइन् । त्यसपछि प्रहरीले पास्टरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बलात्कारबारे कसैसँग भने परमेश्वरले दिएको शक्ति नष्ट हुने भन्दै जोशीले धम्की समेत दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । पक्राउ परेका पास्टरलाई थुनामा राख्न जिल्ला अदालत ललितपुरबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिहेको ट्याक्टरले बाख्रा बचाउन खोज्दा २ जनाको मृत्यु
भोलि आईतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
भोलि–पर्सीको मौसम कस्तो ? वर्षा र हिमपातबारे यस्तो छ पूर्वानुमान
विदेशमा बस दुर्घटना हुँदा ३ नेपालीको मृत्यु, १४ जना घाइते (नामावलीसहित)
आज भारी वर्षा र हिमपात हुने पूर्वानुमान
बालुवाटार जग्गा घोटालाका मुख्य आरोपीको घरमा बम विस्फोट
यसकारण असफल हुँदैछन् प्रधानमन्त्री ओली, वालुवाटारमा खैलाबैला
नेताहरू उपचार खर्चमा बेचिएपछि यसरी लुटिँदैछन् मेडिकल विद्यार्थी, अपराधलाई छुट !
बालुवाटारमा देउवालाई सहमति गराएर ओली–प्रचण्डले यसरी गरे भागबण्डा !
सांसद बन्ने भएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसीको समर्थनमा
आस्था राउतलाई १ वर्ष जेल हुनसक्ने, यस्तो मुद्दा चल्यो !
अटो चलाउँदा दुर्घटना भएर पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्यु
कम्युनिस्टलाई राष्ट्रियसभा चुनाव हार्ने डर, जनप्रतिनिधिमाथि लाग्यो ह्वीप !
रोग निको पार्ने बहानामा ‘बलात्कार’ गर्ने क्रिस्चियन पास्टर ललितपुरबाट पक्राउ
ओली–प्रचण्डको एक निर्णयले नेकपाभित्र ठूलै विद्रोहको संकेत ! कांंग्रेसमा खुसीयाली
कृष्णबहादुर महरालाई जेलभित्र भयंकर टेन्सन, देखाउन थाले यस्ता हर्कत !
बामदेव गौतमलाई ठूलो झड्का, ओलीले बैठकमै झपारेपछि एकछिन सन्नाटा !
ओली सरकारलाई साथ दिन शेरबहादुर देउवालाई अफर ! यी हुन् ३ प्रस्ताव
सभामुखको लडाइँमा प्रचण्डले जित्न थालेपछि ओलीले फाले नयाँ पासा, अब को बन्ला सभामुख ?
ओली–प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाउने प्रसाईं यसरी फसे ठूलो फन्दामा, जेल सजाय हुनसक्ने !
सभामुख चयनले नेकपामा भाँडभैलो, गोप्य बैठकमा प्रचण्डले खोले यस्तो रहस्य
यी हुन् नेकपाभित्र ‘अपराध’ गर्ने शीर्ष नेता, खलनाथ खनालले गरे खुलासा
केपी ओली एक्लिएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दिइन् थप जिम्मेवारी ! (विज्ञप्तिसहित)